Unlock Root Pro 4.1 ကို Full Version ရပါပြီ.. ~ IT Guide Myanmar
9:36 PM Phone Application, Root Tools No comments
မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ.. Root Tool လောကမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ Unlock Root Pro ရဲ့ Version 3.41 ကို Full Version ရလာပါတယ်.. မနေ့ကကျော်ခွပြီး မနည်းဒေါင်းရတယ်ခင်ဗျ.. ဒီ Root Tool ကို ကျွန်တော် ခုထိ မစမ်းရသေးပါဘူး.. Full Version ဖြစ်၊ မဖြစ်ပဲ စမ်းရပါသေးတယ်.. ဟိုတစ်ခါတင်ပေးခဲ့တဲ့ 3.36 တုန်းက သိပ်အဆင်မပြေခဲ့တော့ စေတနာကို နားမလည်သူတစ်ချို့ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုက ပြင်းထန်တဲ့အတွက် ခု ဒီဗားရှင်းကို တင်ပေးရမှာ နည်းနည်း စိုးရွံ့မိတာ အမှန်ပါ.. ဒါပေမယ့် အသုံးပြုလို့ရရပါစေမယ်လို့ အာမ မခံဘဲ တင်ပေးလိုက်ပါတော့မယ်.. အသုံးပြုလို့ရရင်လည်း မိတ်ဆွေများ အဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ.. အသုံးပြုလို့မရခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တော့်ကို အပြစ်စကား ဆိုချင်ဆိုနိုင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ စေတနာ အရင်းခံနဲ့တင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေများ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်..
Full Version ဖြစ်အောင်လုပ်နည်းကတော့ ရှင်းပါတယ်. အရင်တစ်ခါလို Crack , Patch မလိုတော့ပါဘူး.. Internet ဖွင့်ထားပြီး ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ ကီးကို ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ..
The main function of this software is to obtain the highest user privileges, thus you can remove, install or uninstall any applications on your device freely and give youaclean system since you use Unlock Root. It has powerful functions and strong compatibility, and also it is very simple to operate. Nothing to worry whether your device would get bricked, because this software is stable enough.
Unlock Root has over 10,000,000 users around the world. It has2years of development. On December, 2012, Unlock Root Pro launched. It supports Android 2.2-2.3, 4.1 and even the hottest and latest devices, such as Samsung Galaxy S/SII/SIII, Note/Note 2, HTC One X, Amazon Kindle Fire/HD 7",Google Nexus 4/7/10, etc. It is the safest root software and provided with restore function. You can successfully root your device in5minutes. We guarantee 100% refund if failed. What's more, Unlock Phone is free of cost if you purchased Unlock Root Pro.
- Support Android 4.0-4.1
တကယ်လို့များ အခက်အခဲမရှိဘူးဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ အောင်မြင်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစား၊ Android Version တွေကို Comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ maungpauk@gmail.com ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးသားပေးစေလိုပါတယ်.. မအောင်မြင်ရင်လည်း ဘယ် ဖုန်းအမျိုးအစားကတော့ မအောင်မြင်ဘူးပေါ့ခင်ဗျာ..
Support ပေးတဲ့ ဖုန်းစာရင်းကိုတော့ www.unlockroot.com မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်..
မိတ်ဆွေများ အဆင်ပြေကြပါစေလို့ မျှော်လင့်လျက်
မောင်ပေါက် ( Knowledge Note )
Posted in: Phone Application, Root Tools, ဆော့ဖ်ဝဲများ
iPhone/Android ဖုန်းတွေမှာ Google Maps ကို ဘယ်လို လမ်းပြခိုင်းမလဲ...?
Posted by MgHla Mandalay at 4:49 pm ကျတော်တို့ကိုင်နေတဲ့ iPhone/Android handset တွေမှာ Google Maps App ထည့်ထားတယ်၊ အင်တာနက်လ...